Gargaarka degdegga ah ee marka uu weerar argagixiso dhaco - BBC Somali
Gargaarka degdegga ah ee marka uu weerar argagixiso dhaco
DAAWO: Tababar ku saabsan sida la isu badbaadiyo haddii weerar argagixiso uu dhaco oo ay qabatay CitizenAID.
Dadka waxay u baahan yihiin inay bartaan sida la isu badbaadiyo haddii ay la kulmaan weerar argagixiso, ayey sheegeen koox ay ka mid yihiin saraakiil militari iyo dhaqaatiir sameeya tababarka shacabka UK.
Waxay sheegayaan inay u baahan yihiin in dadka ay gartaan sida la isu caawiyo, sababtoo ah waxaa suuragal ah inay waqti qaadato in gawaarida gurmadka degdegga ah ay gaaraan meelaha ay wax ka dhicikaraan.
Waxey kooxda sameeyeen bar-bulsho oo ay dadka UK kala socon karaan talooyiinka ku saabsan arrintan iyo g'aanada qofka uu qaadan karo.
Fikraddan waxaa taageeray laanta la dagaallanka argagixisada ee Britain. Laamaha amniga ee dalkaasi ayaana sheegaya inay suuragal tahay inay weeraro ka dhacaan UK.
Image caption Tababarayaasha waxay dadka u sheegayaa in meesha dhaawaca la cadaadiyo, korna loo haayo
'Carar, dhuumo, wargeli'
Inkastoo ay sida qof uu ula kulmi karo weerar iyo dhacdo ay yartahay, hadana, Brig Tim Hodgetts iyo Prof Sir Keith Porter, oo ah aasaasayaasha barnaamijka loo bixiyay CitizenAID, waxay sheegeen inay arrin fiican tahay in dadka ay sameystaan qorshe, garasho iyo xirfad ay isku caawin karaan.
Tababarka waxaa qeyb ka ah sida loo daaweeyo dhaawaca oo ah sababta ugu weyn ee dadka ay u dhintaan.
Ninkii loo haystay weerarkii suuqa Berlin oo la soo daayay
Waxay dadka u sheegayaan inay si fudud u daaweeyaan dhaawaca oo ah in dhiigga la joojiyo, iyo farsamada is badbaadinta.
CitizenAID maahan wax ay dowladda bilowday, laakiin aasaasayaasha waxay sheegayaan in ujeedada ay tahay talo siinta rayidka, ayadoo la adeegsanayo farriimaha laamaha la dagaallanka argagixisada.
Talooyiinka ay bixinayaan waxaa ka mid ah:
Ka carar goobta haddii aad awoodo
Dhuumo hadaadan carari karin
Wargeli laamaha gurmadka degdegga ah
Lahaanshaha sawirka CitizenAid
Image caption Qaab ku saabsan sida loo caawiyo qofka dhiig baxaya
Casharada goobta dagaalka
Hanaanka CitizenAID wuxuu sheegayaa in dadka looga baahan yahay inay raacaan tallaabooyiin kala duwan.
Waxay soo jeedineysaa in dadka marka ay ogaadaan inay bad qabaan, looga baahan yahay inay billaabaan daaweynta kuwa dhaawaca ah.
Richard Harding, oo ah madaxa laanta la dagaallanka argagixisada ee UK, wuxuu BBC-da u sheegay: "Mid ka mid ah caqabadaha halista ah ee ay wajahaan marka ay dhacdo weerar argagixiso inay tahay, dadka ugu horeeya ee ka jawaabo sida booliska inay billaabaan ka hortagga kuwa sababaya halista".
"Waqti uma helayaan inay la tacaalaan dadka dhaawaca ah, waana halis in muddo laga maqnaado dadka dhaawaca ah".
Mareykanka askari argagixiso loo haysto
Nin Suuriyaan ah oo isku dilay xabsi ku yaalla dalka Jarmalka
Hadaba, laamaha amniga iyo tababarayaasha waxay dadka ku dhiiragelinayaa inay bartaan gurmadka degdegga ah iyo sida loo dhuunto, la isuna caawiyo.
'Go'aanada saxda ah'
Brig Tim Hodgetts, oo ah agaasimaha laanta difaaca arrimaha caafimaadka ayaa BBC-da u sheegay ; "Ma garaneyno xilliga ay dhibaato dhici karto, oo qaraxyo iyo rasaas ay dhici karaan, hadaba waxaan u baahan nahay dad badan oo barta xirfadaha difaaca iyo gurmadka degdegga ah".
"Waa dadka kuwa markastaa goobta wax ka dhacaan joogi kara. waa ayaga kuwa is bedelka sameyn kara."
Wuxuu intaas ku daray: "Waxaan u maleynaayaa inaan sameyneyno arrin aanan dadka cabsi gelineyn. Waan niyad dhiseynaa shacabka".
''Ayadoo tallaabo-tallaabo go'aanada loo qaadanayo, dadka waxaan ka saareynaa cabsida, sababtoo ah go'aanka waa in la sii qaataa, go'aanka saxda ahna waa in si sax ah loo fuliyaa, waana inuu noqdaa mid nolol badbaadinaaya."
Faransiiska oo sheegay inuu fashiliyay "weerar argagixiso"